နေအိမ် အဆိုပါ Cheater ကိုဖမ်း သင့်ကောင်မလေး၏လိမ်လည်လှည့်စားနည်း
အကယ်၍ သင်သည်ရေရှည်သစ္စာရှိရှိဆက်ဆံပါကလိမ်လည်လှည့်စားသည့်အတွေးထက် ပို၍ ဆိုးသည်။ ထိုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိသည်:
ဒါကြောင့်မင်းကိုမလှည့်စားချင်ဘူးဆိုရင်၊ မင်းရဲ့ရည်းစားကသူ့ဖုန်းကို ၀ ှက်နေခြင်း၊ သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်ပါတီများများလွန်းခြင်းစသည့်ထူးဆန်းတဲ့လက္ခဏာတွေပြနေလျှင်၊ သူ၏မုသားနှင့် မင်းရဲ့ရည်းစားကဘယ်သူ့ကိုသတင်းပို့နေတာလဲကြည့်ပါ ဦး အချိန်မီ။ ငါတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ၊ သင်လုပ်လေလေ၊ ထိခိုက်နစ်နာမှုနည်းလေလေဖြစ်သည်။
သူ၏ဖုန်းကိုလျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်ရန် Minspy ဟုခေါ်သောအလွန်ကောင်းမွန်သောဖုန်းသူလျှိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
အပိုင်း ၁။ မင်းရဲ့ Girlfriend Girl ကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲ
အပိုင်း ၁.၁ GirlTP Cheating Catch မှ Minspy - #1 နည်းလမ်း
အပိုင်း ၁.၂ မင်းမိန်းကလေးရဲ့လိမ်လည်မှုကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲ
အပိုင်း ၂: မင်းရဲ့ရည်းစားဟောင်းကိုလှည့်စားမိရင်မင်းဘာလုပ်မလဲ။
တစ်နေ့လက်ထပ်မည်ဟုသင်ထင်သောမိန်းမတစ် ဦး သည်သင့်အားလိမ်လည်လှည့်စားနေသည်ဟူသောအယူအဆသည်သင့်ကိုဝမ်းနည်းစေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီထက်ပိုဆိုးတာကိုမင်းသိလား။ မျက်နှာ၌လိမ်လည်ပါ!
ဒါကြောင့်ငါ့သူငယ်ချင်း၊ မင်းရည်းစားရဲ့အပြုအမူကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုသတိထားမိရင်စိတ်ခံစားချက်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်အဲဒါကိုမဖယ်ပါနဲ့။ မင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာများစွာရှိနိုင်တယ်။ သို့မဟုတ်သင်ကအကြောက်လွန်ရောဂါဖြစ်နိုင်ပြီးဘာမှမရှိနိုင်ဘူး။ ထွက်ရှာရန်တစ်လမ်းတည်းသာရှိသည်။
သငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုသိသောနည်းနည်းလေးသဲလွန်စပေးခြင်းမရှိဘဲသူ့ကိုသူလျှို! မီးခိုးထဲမှာမီးရှိရင်မင်းသိမှာပေါ့။ ပြီးတော့တစ်ခုခုကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ရင်မင်းသိလိမ့်မယ်။
ငါတို့ထင်မြင်ချက်အရဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဆဲလ်ဖုန်းကို 24x7 ကိုလျှို့ဝှက်စွာစောင့်ကြည့်ဖို့ပဲ Minspy.
Minspy သည်သင်သိသောမသိဘဲသင့်ရည်းစား၏ဖုန်းကို ၀ င်ရောက်နိုင်သောမှော်ဆန်သောမျိုးရိုးဗီဇဖြစ်သည်။ ဒီဆဲလ်ဖုန်းသူလျှိုအက်ပလီကေးရှင်းဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာဈေးကွက်ထဲကို ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၄ × ၇ ကိုကြည့်နေသလိုခံစားမိရလောက်အောင်လိမ္မာပါးနပ်ပါတယ်။
ဤသေးငယ်သောအက်ပလီကေးရှင်းသည်အဝေးမှအလုပ်မလုပ်ဘဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့အားသူတို့ရှာဖွေနေသည့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ကျော်မှလူအများသာမက BuzzFeed၊ Engadget နှင့် TechRadar ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးများသည်ဖုန်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနယ်ပယ်တွင်ယင်း၏အမိန့်ကိုအာမခံသည်။
သင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်စရာမလိုဘဲစုစုပေါင်းကိုယ်ပျောက်စနစ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်နောက်ထပ်ကောင်းကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Minspy သည် iOS နှင့် Android တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန် rooting သို့မဟုတ် jailbreaking ကဲ့သို့သောအထူးခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ပါ။
သင်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ မည်သည့်ဖုန်းပေါ်မှာမဆို ရန် IOS ဗားရှင်း Minspy။ သင်လိုအပ်သမျှမှာသင်ခြေရာခံချင်သောဖုန်းတွင်အသုံးပြုသော iCloud အထောက်အထားများဖြစ်သည်။ ပစ်မှတ်ထားလူတစ် ဦး ၏ iCloud ဒေတာကိုအက်ပ်သို့စည်းညှိပြီးသည်နှင့်သင်အကောင့်ကို သုံး၍ သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည့်အွန်လိုင်းဒိုင်ခွက်မှကြည့်နိုင်သည် ဘာမှမ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ။
Android ဗားရှင်း Minspy အခြား Android ဖုန်းသူလျှိုများကဲ့သို့ပစ်မှတ်ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ၅ မိနစ်ထက်မပိုသောအချိန်တွင် app icon ကို configure လုပ်ခြင်းသည် app drawer မှဝှက်ထားနိုင်သည်။ Minspy သည် 3M disk space ထက်နည်းသောကြောင့်လုံလောက်သောဘက်ထရီနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုမသုံးပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာသက်ပြင်းချနိုင်တဲ့သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
* Android spy app များအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ရန်ဖုန်းပေါ်တွင်ထည့်သွင်းထားရန်လိုအပ်သည်။ ဒါက Android ဖုန်းစောင့်ကြည့်မှုအလုပ်လုပ်ပုံပါ။ ဖုန်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းမရှိပဲသူလျှိုလုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်အတုဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာမရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါနဲ့!
အထက်ပါအပြင် Minspy သည်အပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုဇယားသို့ယူဆောင်လာသည်။
ဒီ application ကလုံးဝလုံခြုံပြီးအသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်။ ၎င်းသည်ဖုန်းပေါ်ရှိသုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်များကိုရယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်အချက်အလက်ခိုးယူရန်အခွင့်အလမ်းမရှိပါ
target device ကို root သို့မဟုတ် jailbreak မလိုအပ်သောကြောင့် target device သည် malware နှင့်မထိတွေ့ပါ
ကိုယ်ပျောက် mode သည်သင်ဖမ်းမိခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေသည်
တစ်ကြိမ်တည်း ၀ ယ်ခြင်းကသင့်ကိုအသုံး ၀ င်သောအင်္ဂါရပ် ၃၅ ခုကျော်ကိုခွင့်ပြုသည်။ ဤနေရာတွင် Minspy ၏ကမ်းလှမ်းချက်အားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ။
က အခမဲ့တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြ ဤကိရိယာသည်အသုံးပြုသူအတွက်မိမိအလုပ်အတွက်အတွေ့အကြုံရှိရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ
အသုံးပြုသူများထံမှထောင်ပေါင်းများစွာသောအပြုသဘောဆောင်သည့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများအရ Minspy သည်လိမ်လည်လှည့်ဖျားနေသည့်ဖော်ရွေမှုကိုဖော်ထုတ်လိုပါကထိပ်တန်းဖုန်းသူလျှိုနည်းပညာဖြစ်သည်။
Minspy နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ Intuitive interface နှင့် Setup Wizard ကသင့်ကိုလုံးဝလမ်းညွှန်ပေးသောကြောင့်နည်းပညာမဟုတ်သောကျွမ်းကျင်သူများပင်လျှင်အက်ပ်နှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များသည်သင်၏မိန်းကလေးကို Minspy အပေါ်လိမ်လည်ခြင်းကိုမည်သို့ဖမ်းဆီးမည်ကိုပြသည်။
အဆင့် ၁: မှစ ဆိုင်းအပ် အခမဲ့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်။ အက်ပလီကေးရှင်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုရယူရန်သင်ရရှိနိုင်သော subscription package ကိုရွေးချယ်ရမည်။
အဆင့် ၂: အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော Settings Wizard ကိုသင်ပြလိမ့်မည်။ ပထမဆုံးလုပ်မှာကတော့သင်စောင့်ကြည့်ချင်တဲ့ဖုန်းရဲ့ OS ကိုရွေးပါ။
အဆင့် ၃: နောက်အဆင့်များတွင်ရွေးချယ်ထားသော OS အရတိကျသောအဆင့်များပါ ၀ င်သည်။
က။ ) အကယ်၍ သင်သည် Android ကိုရွေးချယ်ပါကအောင်မြင်မှုရရန်၎င်းအပလီကေးရှင်းအားလက်ဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ပေးရမည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဤစာမျက်နှာတွင်သင်ရှာနိုင်သည်။
ခ။ ) အကယ်၍ iOS ကိုရွေးလျှင်သတိပေးလိုသောဖုန်း၏ iCloud အထောက်အထားများကိုထည့်သွင်းပါ။
အဆင့် ၄: အပေါ်ကအဆင့်တွေပြီးသွားပြီဆိုရင် Finish Installation မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
ပြီးပြည့်စုံသော installation screen ပေါ်ရှိ 'Start' ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းသည် app ကိုစောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းထားသောဖုန်းအချက်အလက်အားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်၊ သင်သည်သင်၏ Minspy dashboard သို့မည်သည့် ၀ က်ဘ်၊ ဒက်ဘ်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဘရောင်ဇာမှမဆိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီးခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ၊ GPS တည်နေရာစသည်တို့ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ရှုပ်ထွေးသောထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ပြိုကွဲမှုများသည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပုံရသော်လည်းအချို့သောမိတ်ဖက်များသည်သူတို့၏လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုကိုခွင့်လွှတ်ပြီးတစ်ဖန်ပြန်လည်စတင်ရန်ကြိုးစားသည်ကိုစိတ်ချပါ။ ပြီးနောက်၊ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးသည်အခြားအခွင့်အရေးတစ်ခုနှင့်ထိုက်တန်သည်မဟုတ်လော။
ကိစ္စတစ်ခုအပြီးတွင်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်သော်လည်းမှားယွင်းသောအရာများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုပြန်လည်ရှင်သန်ရန်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းများကကူညီနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်စစ်မှန်။ အတင်းအကျပ်မဟုတ်ဘဲဖြစ်သည်။
သင်၏ထူးခြားသောအခြားသူများကိုထောက်လှမ်းခြင်းသည်သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုကျူးကျော်သည်ဟုခံစားရနိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်အမှန်တရားအလုံးစုံကိုရှာဖွေရန်တစ်ခုတည်းသောအလားအလာရှိသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ရည်းစားကမင်းကိုလိမ်သည်ဟုခံစားမိလျှင်၊ “ မင်းရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကိုမင်းကိုဘယ်လိုလိမ်မလဲ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေတွေကိုအင်တာနက်မှာမရှာပါနဲ့။ Minspy နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူပါ။